အရှင်လောကပါလ: ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးဆု ပြဿနာ
ဒီရက်ပိုင်းအတွင်း ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးဆု ဆွတ်ခူး လိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သတင်း Forward Mails တွေ တော်တော်များများ ရောက်လာပါတယ်။ 'ဝမ်းသာစရာ သတင်း' ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ရောက်လာတာပါ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ကလဲ ဒီသတင်းကို ဝမ်းပမ်းတသာ ပြောရှာပါတယ်။ ဒီမေးလ်ကို လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်လလောက်ကလဲ ရခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖြစ်နိုင်မယ်မထင်လို့ စိတ်ဝင်စားမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ခုတော့ ဒီသတင်းက အွန်လိုင်းပေါ်မှာရော အပေါင်းအသင်းတွေ ကြားမှာပါ လူပြောသူပြော များနေလို့ မယုံပေမယ့် စိတ်ဝင်စားမိတာတော့ အမှန်ပါပဲ။ ဒီလို စိတ်ဝင်စားရင်းနဲ့ပဲ ဒီသတင်းအကြောင်း ဝေဖန်ရေးသားထားတဲ့ ဒီဆောင်းပါးလေးကို သွားတွေ့ပါတယ်။ အလင်းတန်း ဘလော့ဂါ ကိုမင်းထက်ရဲ့ လက်ရာ ဖြစ်ပါတယ်(http://kominhtet.blogspot.com)။ ဗဟုသုတ ဖြစ်စရာ၊ စဉ်းစားစရာတွေ ပါလို့ အားလုံးကို ဝေငှလိုက်တာပါ။
အခုတလော အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရေပန်းတင်မက၊ ကုန်းပန်း လေပန်းပါ စားနေတဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ သတင်းတစ်ပုဒ် ပလူပျံနေလေရဲ့ဗျို့။ အဲဒီသတင်း အတွက် ပေးထားတဲ့ Comment တွေဆိုလဲ စိတ်ဝင်စားစရာ အလွန့်ကို ကောင်းပါဘိခြင်း။ စာဖတ်သူ အတော်များများလည်း ဖတ်ကြ ပြီးလောက်ရောပေါ့။ “ဗုဒ္ဓဘာသာက အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးဆုကို ဆွတ်ခူးလိုက်သည်” ဆိုတဲ့ သတင်းလေ။ အတော်အတန် သိလောက်ပြီး ဖြစ်ပေမဲ့ မသိရသေးသူများအတွက် သတင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက် အနည်းငယ်ကို အရင် တင်ပြပေးပါဦးမယ်။ ဒီလိုတဲ့...
(၁) promoting personal and community peace =
လူတစ်ဦးချင်းစီနှင့် လူ့အသိုင်းအ၀ိုင်း တစ်ခုလုံး၏ ငြိမ်းချမ်းမှုကို မြှင့်တင်ရေး
(၂) increasing compassion andasense of connection=
ကိုယ်ချင်းစာနာမှုနှင့် ဆက်ဆံပေါင်းသင်းရေးဆိုင်ရာ အသိကို တိုးမြှင့်ပေးရေး
(၃) encouraging preservation of the natural environment=
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းမှုကို အားမြှင့်ပေးရေးဆိုတဲ့ မူ (၃)ချက်နဲ့အညီ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ ဘာသာတရားပေါင်း (၃၈) ခုကို သုတေသနပြုပြီး သက်ဆိုင်ရာဘာသာ အသီးသီးတို့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ပေါင်း (၂၀၀) ကျော်ကို တယ်လီဖုန်းနဲ့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် အများစုက သူတို့ရဲ့မူရင်းဘာသာကို မဲမပေးဘဲနဲ့ ဒီဆုနဲ့ အထိုက်အတန်ဆုံးဟာ ဗုဒ္ဓဘာသာတရားသာ ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပဲ “ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘာသာတရား” အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုပြီး မဲပေးခဲ့ကြပါသတဲ့။ အဲဒီထဲက ဘာသာရေးခေါင်းဆောင် တစ်ချို့ရဲ့ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ မှတ်ချက်တွေက ဒီလိုပါ။
မြောက်အိုင်ယာလန်နိုင်ငံရဲ့ မြို့တော် Belfast မှာနေထိုင်သူ ခရစ်ယန် ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ Ted O'Shaughnessy ကတော့ သူ့အမြင်ကို ဒီလိုပြောပါတယ် “ကျုပ် ကက်သလစ်ခ်ဘုရား ကျောင်းတော်ကို သိပ်ချစ်ပေမဲ့ ကျုပ်တို့ဟာ စာထဲပါတဲ့ မေတ္တာတရားဆိုတာကို ဟောပြောနေကြတာပဲ၊ နောက်ပြီး ဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုတော်ကို သိရမယ်တဲ့။ အဲဒီဘုရားသခင်ရဲ့ အလိုဆိုတာကလဲ လူသားတွေကို သတ်ဖြတ်နေတယ်လို့ သိရတဲ့အခါ ကျုပ် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်လှတယ်၊ အဲဒါကြောင့် ကျုပ်ကတော့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကိုပဲ မဲပေးခဲ့တယ်”။
ပါကစ္စတန်နိုင်ငံက မွတ်စလင်ဘာသာရေး ဓမ္မဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ Tal Bin Wassad ကလည်း သူ့အမြင်ကို ဘာသာပြန်ကနေ တစ်ဆင့် ဒီလိုပြောပါတယ် “ကိုင်းရှိုင်းတဲ့ မူစလင်ဘာသာဝင် တစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျုပ်တွေ့နေ မြင်နေရတာက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းတဲ့အခါ ဘာသာရေးပြယုဂ်တွေထဲမှာ ဒေါသတွေ၊ သွေးမြေကျမှုတွေ ဘယ်လောက်တောင် စီးဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုပါပဲ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာမှာတော့ အဲဒါမျိုး မတွေ့ရပါဘူး။ နောက်ပြီး ကျုပ်ရဲ့ အကောင်းဆုံး မိတ်ဆွေတွေဟာလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်”။
ဂျေရုစလင်မြို့က ဂျူးဘာသာဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်သူ Rabbi Shmuel Wasserstein ကလည်း “ကျုပ် ဂျူးဘာသာတရားကို သိပ်မြတ်နိုးတာပေါ့ဗျာ၊ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးကျယ်ဆုံး ဘာသာတရားတစ်ခု လို့တောင် ကျုပ်ယူဆပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ ရိုးရိုးသားသား ၀န်ခံရရင်တော့ ဂျူးဘာသာရေးဆိုင်ရာ နေ့စဉ်ဝတ်ပြုဆုတောင်းမှု တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Minyan မလုပ်ခင်မှာ နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း ကျုပ် ၀ိပဿနာတရား အားထုတ်တယ်၊ အဲဒါ ၁၉၉၃ ခုနှစ်ကတည်းပဲ၊ ဒါကြောင့် ကျုပ် ဗုဒ္ဓဘာသာထဲပဲ မဲထည့်လိုက်တယ်” ဆိုပြီး သူ့ဆန္ဒကို ထုတ်ဖေါ်ခဲ့ပါတယ်။
သူတို့နည်းတူ အခြားအခြားသော ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များကလည်း သူတို့အကြောင်းပြချက်နဲ့ သူတို့ ဗုဒ္ဓဘာသာအပေါ် မဲပေးခဲ့ကြတယ်လို့ သတင်းက ဆိုပါတယ်။ ချုပ်လိုက်တော့ ဗုဒ္ဓဘာသာက မဲအများဆုံးရပြီး ကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံး ဘာသာရေးဆုကို ဆွတ်ခူးလိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ပြဿနာက “ဒီသတင်းဟာ အမှန်အကန်မှ ဟုတ်ရဲ့လား” ဆိုတဲ့မေးခွန်းအတွက် ပေးရမည့် အဖြေပါပဲ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ဒီဆုကို ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ဆွင့်ဇလန်နိုင်ငံ၊ ဂျီနီဗာမြို့မှာ အခြေစိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့ International Coalition for the Advancement of Religious and Spirituality (ICARUS) အဖွဲ့အစည်းဟာ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ရှာမရသလို အဖွဲ့ရဲ့ ဒါရိုက်တာတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ Hans Groehlichen ဆိုသူကိုလည်း အခုထိ ဘယ်သူမှ ဆက်သွယ်လို့ မရဖြစ်နေပါတယ်။
Comment ပေးကြတဲ့လူတွေကို ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် သာမန် အွန်လိုင်းဝါသနာအိုးတွေ သာမက ဘာသာရေး စိတ်ဝင်စားသူတွေ၊ ပါမောက္ခကြီးတွေအပြင် သီတဂူကမ္ဘာ့ဗုဒ္ဓတက္ကသိုလ်ကို တည်ထောင်တော်မူတဲ့ အဓိပတိဆရာတော်တောင် ပါပါသေးတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ Comment ကတော့ ဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှ မပြောပါဘူး။ ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ တခြားဘာသာတွေရဲ့ ကွာခြားချက်ကိုသာ ထောက်ပြသွားတာပါ။ ဒီအတွက် ဆရာတော်က စကားလုံး နှစ်လုံးကို သုံးခဲ့ပါတယ်။ Theocentric (ဖန်ဆင်းရှင်ပဓာန) နဲ့ Homocentric (လူသားပဓာန) ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေပါ။ ဒီစကားလုံးတွေကို သာမန် အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်ထဲရှာလို့ တွေ့ကြမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဆရာတော်ဘုရားက ဗုဒ္ဓဘာသာဟာ လူကို ဗဟိုပြုတဲ့ဘာသာဖြစ်ပြီး တခြားဘာသာတွေကတော့ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ဗဟိုပြုတဲ့ဘာသာတရား ဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားပြပါတယ်။ ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ မှတ်ချက် အချုပ်ကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
တစ်ချို့လဲ မဆီမဆိုင် ထေရ၀ါဒက ဘယ်လို၊ မဟာယာနက ဘယ်လိုဆိုပြီး ဆရာလုပ် သွားကြပါသေးတယ်။ Comment အတော်များများကတော့ ဒီသတင်းကို ကြိုဆိုတဲ့အကြောင်း၊ သိရတာ ၀မ်းသာတဲ့အကြောင်း ရေးကြပါတယ်။ ဆန့်ကျင်ဘက်လုပ်ရေးတဲ့ လူတွေလဲ အတော်များများတွေ့ရလေရဲ့။ တစ်ချို့လဲ ဒီဆုကြောင့် ဘာသာရေး ပဋိပက္ခတွေ ပိုမိုများပြားလာနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြကြပါတယ်။ လူတိုင်းလောက်နီးပါးဟာ ကိုယ်ကိုးကွယ်ယုံကြည်ရာ ဘာသာတရားကိုသာ အကောင်းဆုံးလို့ လက်ခံယူဆ ကြတဲ့အတွက် ဒီလိုဆုမျိုးဟာ တကယ်ရှိရင်တောင် ပြန်ဖျက်သိမ်းသင့်ကြောင်း အဆိုပြုထားလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဒီသတင်းဟာ အစစ်အမှန်ဖြစ်ရင် ကြိုဆိုသင့်ပေမဲ့ အထက်မှာပြောခဲ့သလို
(၁) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေ အင်တာနက်ပေါ်မရှိခြင်း
(၂) အဖွဲ့တည်ရာကို မညွှန်ပြခြင်း
(၃)ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ အီးမေးလိပ်စာတွေ ပေးမထားခြင်း စတဲ့ အကြောင်းတွေကို သုံးသပ်ကြည့်ရင် ဒီသတင်းဟာ ကြက်သွန်နီသတင်းမျိုး ဖြစ်ဖို့ရှိကြောင်း ဝေဖန်ကြပါတယ်။ ကြက်သွန်နီဥဟာ အလွှာတစ်ခုပြီး တစ်ခု ခွါလိုက်တဲ့အခါ နောက်ဆုံးအတွင်းသားမှာ ဘာမှမတွေ့ရပဲ လွှာသူမှာသာ မျက်စိစပ်ပြီး ကျန်ရစ်သလို ဒီသတင်းနောက် လိုက်နေရင်တော့ နောက်ဆုံး ဘာမှမတွေ့ရပဲ အင်တာနက်ကြည့်ရလွန်းလို့ မျက်စိစပ်ပြီး ကျန်ရစ်မှာဖြစ်ကြောင်း တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။ ကျနော်ရဲ့ မျက်စိတွေလည်း ဒီသတင်းနောက် စိတ်ဝင်တစားလိုက်ဖတ်ရင်း အခုတော့ စပ်နေပါပြီ။
မှတ်ချက်။ ။ စိတ်ဝင်စားသူများ အောက်ပါ Website တွင် ၀င်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါကြောင်း အသိပေးပါသည်။
အထက်က ဝက်ဆိုက်ထဲမှာ ရေးထားကြတဲ့ ကွန်မန့်တွေထဲက စိတ်ဝင်စားစရာ နှစ်ခုကိုလည်း ဝေငှလိုက်ပါတယ်။
I think it is very clear that this piece is an Onion style joke. Not sure what the origin was, but I found it pretty funny.
It is so like our culture of competition to havea"Best Religion in the World" competition and then nameanonreligion the winner!
July 21, 2009 6:12 PM
First of all, I thank FFRF,anon religious organization for choosing Buddhism as the world's best 'religion'.
If an organization oraperson wishes to give an award to Buddhism, one must learn and follow the teachings of the Lord Buddha. One should pay deepest respect to the lord Buddha, the founder of Buddhism and the teacher of the Dhamma.
However, Religion is Theocentric (God center) teaching. Dhamma is homocentric (human center) teaching. If someone follows the Dhamma, pratice the Dhamma, he is automatically free from religion.
The best following of the Buddha's teaching is the best reward to Buddhism as the best religion.
Chancellor Sitagu International Buddhist Academy
Posted by Ashin Lokapala at 1.12.09